Ingcwele yoLwandle lwaseOshun, kuNxweme lwaseMpuma, eBarbados - I-Airbnb
Ingcwele yoLwandle lwaseOshun, kuNxweme lwaseMpuma, eBarbados
Igumbi eliphantsi elizimeleyo elineendonga zamatye ezimhlophe ezipholileyo ezibekwe kwigadi ethandekayo 3 imizuzu yokuhamba ukusuka kuLwandlekazi lweAtlantiki kuNxweme oluseMpuma lweBarbados.
UMGAQO-NKQUBO OMQHELEKILEYO WE-COVID-19: Ukugcina ukhuseleko kunye nemfezeko yekhaya lethu ASILUNIKEZI UNTYELELO 'UKUJONGA' IPROPATI. Zonke 'amalungiselelo' entlawulo kufuneka zenziwe ngo-Airbnb.
Ukusetyenziswa ngokukhethekileyo kwepatio enkulu egcwele ngokupheleleyo yokusela kwindawo yokubona, izandi kunye nempepho yoNxweme lwaseBarbados.
Wamkelekile kwindawo yethu engcwele, (Nceda uqaphele: Asisaququzeleli ukhenketho lwesiza/utyelelo),
Sihlala kuNxweme oluseMpuma lwaseBarbados kwaye siyakuthanda ukucamngca, ukubhala nokuphulaphula umculo. Siyayithanda apha kuba isivumela ukuba siphumle, sisebenze kwaye sabelane ngobomi bethu nabantu abanengqondo efanayo.
UMGAQO-NKQUBO OMQHELEKILEYO WE-COVID-19: Ukugcina ukhuseleko nemfezeko yamakhaya ethu asinakukwazi ukwamkela utyelelo 'lokubukela' okanye ukonwabisa 'amalungiselelo' entlawulo ngaphandle kweqonga lika-Airbnb.
Ikhaya lethu 'i-Oshun (ebizwa ngokuba yi-o'shoon) Indawo engcwele yoLwandlekazi' ikhona ecaleni kwendalo ibonelela ngekhusi kunye nentuthuzelo kufutshane noLwandlekazi lweAtlantiki. Wamkelekile ukuba uxovule umva kwaye ulahle ukuxinana ngexesha lakho kunye nathi ngokuphumla, ukuphefumla kunye nokuvuselela. I-Oshun Ocean Sanctuary yindawo yokuphoswa kwelitye kude noLwandlekazi lweAtlantiki kwaye yonwabela umoya opholileyo ohamba nesandi kunye nokubona izithuba zendalo ezingaphandle.
'Ngaphakathi kokuhlala Ngaphandle' kubulisa bonke abatyeleli abangena kwiyadi ekufutshane eyakhiwe ngamatye amhlophe ukuze zonke iindwendwe zikwazi ukubukela umgama obonakalayo. I-Hammockville vibes ibonelela ngee-nooks ezininzi ezinobuhlobo kunye ne-hammock eneendawo zokujonga ezithe tye ukuze uphumle ngokukhuselekileyo nangokukhululeka.
Ukunethezeka kunye nokhuseleko lweendwendwe zethu yeyona nto iphambili kwaye ke senza zonke iinzame zokubambelela kwimigaqo yokucoca ngokungqongqo ngelixa sigcina amakhaya ethu eshushu kwaye amkelekile.
Kukho i-washer kunye nesomisi kwindawo ethintelweyo kwipropati, leyo, ngenjongo yokhuseleko, isetyenziswe ngabasebenzi bepropathi abaqeqeshiweyo kuphela. Nangona kunjalo, siyavuya ukubonelela ngenkonzo yokuhlamba impahla ngamalungiselelo entlawulo eyongezelelweyo. Sazise nje iimfuno zakho kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuze sizilungiselele.
Iindwendwe zisenokukhetha ukusebenzisa indawo yokulahla/yokulanda impahla e-Speightstown (kukho enye ejongene neSupermarket yaseJordan eQueens Street kunye nenye ekuMall ecaleni kwevenkile yokutyela edumileyo yokutya okukhawulezayo).
ISermac Laundry Co Ltd
Izinto ezinikezelwayo: Ukucoca, Iinkonzo zokuhlamba impahla, ukuhlamba impahla, ukuqeshwa kweelinen, ukuCoca ilinen,
ISitrato saseChapel, eSpeightstown, eSaint Peter, eBarbados
ICoca Craft Co Ltd
iSpeightstown Mall, Speightstown, St Peter, Barbados
Sizixabisile zonke iindwendwe zethu kwaye ke ukuze siqinisekise ukuba iindwendwe zethu zikhuselekile sibonelela ngemeko-bume ebolekayo kuhambo lwendalo lwentlalo. Njengelinye inyathelo lokhuseleko, sinomgaqo-nkqubo ongqongqo woNXIBELELWANO KWAYE LONKE UNTENZISEKO KUFUNEKA LWENZIWE NGENKQUBO YE-AIRBNB KUPHELA!
Sijonge phambili ekwamkeleni. Yiba nohambo olukhuselekileyo.
Ulwandle luyimizuzu emi-3 ukuhla kwinduli yokuzenzela okanye ungahlala nje kwaye uphumle kwipatio egqunywe ngesisa. Luhambo oluyinyani ngokupheleleyo; icocekile kwaye inoxolo. Impepho yolwandle, uxolo kunye nokuzola yinto yethu ekhethekileyo.
Iindwendwe kunye neeNdwendwe ziphawula ngendlela abaziva ngayo xa beza e-Oshun. "Ungayiva ityuwa yolwandle oluphilisayo emoyeni ngendlela ethandekayo nehlaziyayo."